Dhiirrigelinta ka qeybgalka bulshada rayidka ah ee Yaman: Ololaha Macluumaadka Dadweynaha ee WASL - Helitaanka Helitaanka Caalamiga ah
Iyadoo lala kaashanayo UNICEF, Equal Access International (EAI) waxay billowday "Ololaha Wacyigelinta Dadweynaha ee WASL" bishii Juun 2013 si loo xoojiyo codadka dhallinta Yaman iyadoo loo marayo olole ballaaran oo warbaahineed iyo waxqabadyo badan oo macluumaadka dadweynaha ah. EAI waxay si dhow ula shaqeysay hoggaamiyeyaasha qaan-gaarka ah iyo xubnaha bulshada ee sideed gobol si loo dhiirrigeliyo dabeecadaha wanaagsan ee ku aaddan doorka wax-ku-oolka ah ee dhallinyarada ay ka ciyaari karaan gacan ka geysashada qaabeynta mustaqbalka Yemen.
Sanadkii 2013, iyadoo Yemen ay sii wadayso marxaladda kala guurka ah, arrimaha amniga waxay ahaayeen halis joogto ah oo EAI-Yemen ay diyaar u ahayd inta lagu gudajiray fulinta howlaheeda oo dhan.
EAI waxay soo saartay 22 qaybood oo taxane ah oo raadiyadeed ah, Aynu Noqno Mid Wadajir Ah, kaas oo diiradda lagu saaray arrimaha qaan-gaarka ee muhiimka u ah bulshada oo ay ka mid yihiin guurka carruurta, ka shaqeynta carruurta, iyo qaababka ay dhallinyaradu door wanaagsan uga ciyaari karto horumarka bulshadooda. Qaybaha waxaa laga sii daayay sagaal idaacadood oo maxalli ah oo ku yaal siddeedda gobal ee bartilmaameedka u ah Sanca, Aaden, Taiz, Lahj, Hodeidha, Hadramout, Dhamar, Ibb, Mareb, iyo Al-Iwaf. Intaas waxaa sii dheer, 17 wariyeyaasha bulshada (8 haween ah iyo 9 rag ah) oo ka kala yimid sideeda gobal ayaa qaatay tababar ku saabsan doorarka iyo waajibaadka wariyeyaasha bulshada, sida farsamooyinka wareysiga, warbixinta xasaasiga ah, iyo anshaxa suxufiga.
Barnaamijyada raadiyaha ka sokow, EAI waxay billaabeen ololeyaal dhowr ah oo ku saabsan macluumaadka dadweynaha oo ay horkacayaan dhallinyaro si kor loogu qaado wacyiga kaqeybgalka dhalinyarada ee bulshada. Waxqabadyada waxaa ka mid ahaa samaynta boodhadh, waraaqo xaashiyo ah, boorarka, iyo sawir gacmeedyada darbiyada ee 10ka gobol; illaa 15 u soo muuqasho xayeysiis ah oo ka baxa barnaamijyada TV-ga maxalliga ah ee muujinaya howlaha iyo arrimaha mashruuca. Ugu dambeyntiina, EAI waxay soo saartay afar filim oo gaagaaban oo ka hadlay arrimo kala duwan oo ku wajahan dhalinyarada Yemen. Waxqabadyadii kala duwanaa ee la hirgaliyay inta lagu gudajiray mashruucan waxay heleen dareenka dadweynaha, iyadoo lagu xusay in kabadan 40 daabacaad iyo maqaallada wararka qadka tooska ah ee wadanka oo dhan.
muraayadaha asalka ah ayaa lagu dhajiyay afar maamul oo kala duwan (Sanca, Aaden, Ibb, iyo Taiz)
dhalinyarada waxay xaqiijiyeen inay isticmaali doonaan aqoonta iyo xirfadaha ay ku barteen barnaamijka mustaqbalka.
kaqeybgaleyaashu waxay cadeeyeen in waxa ay ku barteen mashruucan ay faa iido u lahaan doonaan si ay saameyn uguyeelaan beel beelkooda.
"Dhamaan arrimaha aan ka wada hadalnay oo aan baranay waa muhiim inagaga muhiim ah, sida guurka hore, shaqada caruurta, tahriibinta dadka, dadka gudaha ku barokacay… Hada aqoonteenna ayaga ku saabsan ayaa sare usii qaaday."
Kala shaqee EAI si loo gudbiyo ajandaha ka mid noqoshada kaasoo u oggolaanaya dhalinyarada inay codkooda baahiyaan oo ay hogaamiyaan.